अशुरक्षित यौन सम्पर्कले पनि लाग्न सक्छ हेपटाईटिस, कसरी थाहा पाउने ? - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७६ साउन १२ गते ११:२६ मा प्रकाशित
आज २७ जुलाई अर्थात बिश्व हेपटाईटिस दिवस । देश भर बिभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाईएको छ । हेपटाईटिस भनेको कलेजोको रोग हो । सामान्य भाषामा हेपटाईटिस लाग्नु भनेको कलेजो बिग्रनु हो ।
कलेजो बिग्रनुका बिबिध कारणहरु हुन्छन् । डा. सुबास भट्टराईका अनुसार कलेजो बिग्रनुको मुख्य कारण रक्सी हो । अशुरक्षित यौन सम्पर्कले पनि हेपटार्यटिस रोग लाग्छ । जताभावी प्रयोग गरिएका सुई, रगतको माध्यमबाट पनि यो रोग लाग्न सक्छ । साधारण स्वस्थ अनुभव भएको मानिसलाई पनि हेपटार्यटिस रोग हुन सक्ने भएकाले यो रोगको बेलैमा जा“च गराउन डा भट्टराई सबैलाई आग्रह गर्छन् । हेपटाइईटिस रोगको बारेमा गरिएको यो कुराकानी हेरौं .